Ipo iyo iPhone 13 iine mwedzi kubva pakuburitswa kwayo, uye inotarisirwa muna Gunyana 2021, Seye anotungamira kugadzira weiyo skrini inodzivirira, OTAO inogara ichivavarira kuwana data remafoni maseru kugadzira zvigadzirwa zvine hukama, uye kuvhura girazi rakadzikama .. .
Muchengeti wekrini anobatsira iwe !!!
Chii chako kunzwa kana skrini yako yakamenywa uye kutyorwa kana mbozhanhare yadonha pasi ?? Uchaita sei ipapo? 1. Ungafunga here kushandisa USD800-1000 kutenga imwe nharembozha? Kunyanya iyo yekutanga foni ingori kambani newe chete hafu kana imwe ...
Chinese Nyowani gore rezororo uye skrini inodzivirira kurongeka
Chinese Nyowani Nyowani iri kuuya sekufamba kwenguva, inozivikanwawo seMuchirimo Mutambo. Ndiyo mhemberero huru kwazvo muChina, ine zororo remazuva manomwe. Sechiitiko chakajeka kwazvo chegore negore, tsika yeChinese Idzva Idzva inotora vhiki mbiri, uye mugumo unosvika wakakomberedza Chinese Nyowani Ye ...
2020 OTAO Yegore Bato rakaitwa musi waJan 20th
Nekuputika kweiyo coronavirus nyowani pakutanga kwegore, nyika dzese dzinonyatso kudzora kupinda kwevanhu, izvo zvinokanganisa zvakanyanya kutengeserana kwepasi rose. Nekuenderera kuri kukanzurwa kwemitambo isingaenzaniswi, huwandu hwekutengesa hwevatengi vepamhepo vatengesi h ...